Ngaba usebenza neMibutho yobuNtu? | Martech Zone
Ngaba usebenza neMibutho yobuNtu?
NgoLwesithathu, Novemba 15, 2006 NgoLwesibini, Novemba 21, 2017 Douglas Karr
Namhlanje ndijoyine ikomiti yesisa yenkampani yam, ExactIMPACT. Andisoloko ndinethuba okanye nezixhobo zokubuyisa ngenxa yoko ndaye ndagqiba kwelokuba ndenze umsebenzi wesisa kwindawo endichitha ixesha elininzi kuyo! Lo mbulelo ujongeke mfiliba kwizibonelelo ezijonga abantu abaninzi kuluntu lwethu abangakwaziyo ukuzikhathalela. Leyo yingxelo ebuhlungu enikwe amandla oqoqosho lwethu. Esinye isibalo sokugcina engqondweni kukuba xa abantu belinganisa ukungabikho kwemisebenzi, ngokwenene babala abantu basebenzisa imali yengqesho. Baninzi ngakumbi abantu abangasebenziyo kwaye bafuna imisebenzi abangayifumaniyo.
Kuyo nayiphi na inkqubela phambili yezoqoqosho, ziinkampani ezikhula ngokwenene. Ukuba awuzange ube nethuba lokuyibukela, ndingacebisa IQumrhu. Umboniso bhanyabhanya utsala imitya 'yasekhohlo', kodwa ndiyayithanda ingqiqo ngokubanzi yemovie… ethi 'amashishini' akanawo omnye umsebenzi ngaphandle kokwenza inzuzo. Nguwo kuphela umsebenzi esitokhwe kwisitokhwe.
Ngenxa yoko, iinkampani ezininzi zibeka phambili ekuthatheni inxaxheba kwizibonelelo kunye nezinye izinto zokunceda. Lilishwa ngokwenene elo. Kodwa iinkampani ezininzi ZENZA, kwaye awuva malunga nazo rhoqo. UScott Dorsey, iCEO ye NgqoThagethi, uthethe namhlanje malunga ne-Salesforce kunye nendlela abaqhuba ngayo ububele. Andizange ndiyazi! Ndifumene inqaku lakutshanje elithetha ngalo:
I-Benioff iqinisekise ukuba inkampani yamkela imodeli yokunikela nge-1% ye-equity, i-1% yenzuzo kunye ne-1% yexesha labasebenzi kwasekuqaleni. I-IPO yeSalesforce.comâ ngehlobo lonyaka ka-2004 yajika kwangoko ukuba i-1% yesabelo kwi-asethi yezigidi ezili-12, yajika isiseko saba ngumbutho omkhulu ngobusuku nje obunye. Kodwa umnikelo wexesha labasebenzi ngowona mbandela ubaluleke kakhulu kulungelelwaniso lwaseBenioffâ? Kuba luqinisekisa ukuba yonke inkampani ithatha inxaxheba kwinkqubo yokupha, ichaphazela kakhulu inkcubeko yenkampani.
UScott ucela umngeni kwikomiti yethu ukuba iququzelele iinzame zethu zokunceda ukuba zilinganiswe njengeSalesforce. Lo ngumceli mngeni omangalisayo! Umsebenzi onjalo uyanelisa. Ndonwabile ukuba yinxalenye yekomiti kunye nenxalenye yenkampani. Ukuba uyakholelwa ukuba iinkampani kufuneka zenze ngaphezulu, mhlawumbi kuya kufuneka uqale ngokubuza abathengisi bakho ukuba babuyisela njani eluntwini. Ukuba kukho uxinzelelo ngakumbi kwimibutho yokwenza okungakumbi, ngekhe bayifumane impumelelo abayinqwenelayo ngaphandle kwesisa. Omnye wemibutho esijonge ukunceda yi-Wheeler Mission:
Izibalo zoMsebenzi we Wheeler, Indianapolis:
Baninzi kangangeshumi elinesihlanu lamawaka abantu abangena makhaya kwisixeko sethu minyaka le
Indawo yokuhlala ibonelelwe: 5,960
Lilonke inani lokutya okuhanjisiweyo: 19,133
Lilonke inani leengxowa zokutya ezihanjisiweyo: 434
Amadoda angama-68 ayekwiinkqubo zethu “zeMfuno eziZodwa”: kunanini na ngaphambili kule nkqubo
Kwinqaku elifanayo, Umsebenzi we Wheeler apha edolophini ufuna uncedo lwakho kulo nyaka. Ukuba unako, shiya ukutya: iTurkey, i-Homemade Macaroni kunye neCheese, ukugxila, iiMbotyi eziluhlaza, isaladi eluhlaza, isosi entsha yeCranberry, iiRinner Rolls, iApple Cider, iikeyiki kunye neePie. Unokunikela kwakhona kwi-Intanethi! U-Wheeler ujonge amavolontiya ali-100 ukuba ancede ngeDrumstick Dash, oyena mntu uxhasa imali kakhulu kulo nyaka.
tags: benioffngqongqoukuthengisaYenzani dorseyiqumrhuumsebenzi wevili
Iingcebiso ezili-10 eziphezulu zokufumana uMvuzo oBhetele
Zonke iiMveliso ziNcoko